Tsy miombon-kevitra amin’i Trump manondro ny fireneny ho fandrahonana ny fandriampahalemana i Montenegro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2018 9:11 GMT
Conservative commentator Tucker Carlson on Fox News asked Trump about Article 5 of NATO treaty, which obliges its members to come to the aid of other member states when they are under attack. He asked why America’s sons should go defend Montenegro, the newest NATO member. To that, Trump said that “Montenegro is a tiny country with very strong people” who “may get aggressive, and congratulations, you’re in World War III.”
Nanontany an'i Trump mikasika ny andalana faha-5 ao amin'ny fifanarahana OTAN i Tucker Carlson avy ao amin'ny Fox News, izay manery ny mpikambana ao aminy mba hanampy ireo firenena mpikambana hafa rehefa iharan'ny fanafihana. Nanontany izy hoe nahoana ireo Amerikana no tokony hiaro an'i Montenegro, mpikambana vaovao ao amin'ny OTAN. Amin'izany, nilaza i Trump fa “firenena matanjaka misy vahoaka matanjaka i Montenegro” izay “mety ho lasa mahery setra, ary miarahaba anao tafiditra ao anatin'ny Ady Lehibe Fahatelo”.
Nanakiana ilay teny hoe “fanomezana ho an'i Putin” ireo diplaomaty sy mpanao lalàna amerikana ambony ary mandiso ny fomba fiasan'ny andininy faha-5 nandritra ny fifanakalozana teo amin'ny Fox News ny fanazavana iray avy amin'ny Business Insider. Tsy afaka miantso ny adininy faha-5 ny firenena iray mpikambana ao amin'ny OTAN hitarihana ady amin'ny mpikambana iray hafa ao amin'ny OTAN ary mitaky ny fidirana an-tsehatr'i Etazonia satria tsy fanafihana atao amin'ny mpikambana ao amin'ny OTAN izany fa avy amin'ny mpikambana ao amin'ny OTAN “.
Amin'ny mponina 642 000 eo ho eo, Montenegro no fanjakana kely indrindra ao Balkana araka ny isan'ny mponina. Nahaleotena izy tamin'ny taona 2006. Nobahanan'ny vondron'olona sangany iray ihany tao anatin'ny 28 taona ny sehatra politika izay misara-kevitra lalina teo amin'ny governemanta pro-Eoropeana (EU) sy pro-OTAN sy mpanohitra iray ahitana ireo antoko voampanga ho mifamatotra amin'ny Serbia sy Kremlin.
Tamin'ny taona 2016, nanambara ny manampahefana ao Montenegro fa nanakana ny fanonganam-panjakana izay notohanan'i Rosia izay nikendrena ny hanakanana ny firenena tsy ho mpikambana ao amin'ny OTAN.
Nanatevin-daharana ny OTAN Ny Montenegro tamin'ny Jona 2017 na dia teo aza ny tsy fankasitrahan'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Rosiana, izay namoaka fandrahonana ofisialy hisian'ny fepetra famaizana.
Teny andalana teny, teo no nisian'ny resabe voalohany mikasika an'i Montenegro izay mifandray amin'i Trump rehefa nanosika ny Praiminisitr'i Montenegro Duško Mirković ny filohan'ny Etazonia nandritra ny fakàna sary ny mpitondra ny OTAN. Raha nilaza ny praiminisitra fa “tsy mampidi-doza” ilay fanapahan-kevitra, nampiasa azy io ny mpanohitra nasionaly mba hanamarinana ireo hetsi-panoherana manohitra ny OTAN.
Manome fanazavana mazava momba ny fivoarana ara-tantara vao haingana mandritra ny 8 minitra sy sasany ity lahatsary ity.
Mbola namaly tamim-pahamendrehana an'i Trump indray ny governemanta an'i Montenegro manohana ny fifandraisana amin'ny fisakaizana sy ny fiarahamiasa amin'i Etazonia.Nanamarika izy ireo fa” amin'izao vanim-potoana iainantsika izao,tsy midika inona na kely ianao na lehibe fa hatraiza no hankamamianao ny soatoavin'ny fahalalahana, ny firaisankina ary ny demaokrasia”.
Governemantan'i #Montenegro: mirehareha amin'ny tantarantsika isika, ny fisakaizantsika, matanjaka sy maharitra ny fifaneraserantsika amin'i #USA #USpartnerMNE #WeAreNATO https://t.co/WPn0PMrU0h pic.twitter.com/DOeRutynUm
Etsy ankilan'izany, naneho “ny fanohanany an'i Trump” i Marko Milačić, mpanao politika mpanohitra ao Montenegro mba hidirana ao amin'ny karazana fampisainana ireo mpanohitra ny fidirana ao amin'ny OTAN izay tsy mitsahatra ny manontany zavatra mitovitovy nandritra ny taona maromaro izay: “Nahoana ny miaramila an'i Montenegro no hiady manerana izao tontolo izao, hiaro ny vahoaka izay tsy hitany ao anaty sarintany omaly akory? ” Nolaviny ny filazana ny Ady Lehibe Fahatelo ho “vazivazy”. Manohitra ny maha-mpikambana azy ao amin'ny OTAN sy ny Vondrona Eoropeana ny Milačić izay mpifikitra amin'ny nentin-drazana ary hita mandoro ny sainan'ny OTAN izy ao amin'ny horonantsary etsy ambony. Tafiditra ao anatin'ireo laharam-pahamehany hafa ny ny soatoavin'ny fianakaviana sy ny fisorohana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana.
Ny fotoana farany,niantsoana ny andininy faha-5 amin'ny dinan'ny dia nataon'i Etazonia taorian'ny 11 septambra 2011, nitarika ho amin'ny bemidin'ny OTAN tao Afghanistan, izay ahitana fandraisana anjara mivantana an'i Montenegro hatramin'ny taona 2010 mialoha ny maha-mpikambana azy.
Ohatra, nanambara tamin'ny fomba ofisialy hiady amin'i Japon, tamin'ny taona 1904, ny fitondram-panjakan'i Montenegro teo aloha, ho mariky ny fanohanana ny mpiray dina aminy dia ny Ampira Rosiana nandritra ny ady Rosiana-Japoney. Nisy aza angano iray nilaza fa nisy miaramila Montenegrina iray nandeha nankany Farany Atsinanana hanatevin-daharana ny tafika Rosiana ho mpilatsaka an-tsitrapo ary nandresy tamin'ny fanaovana iray sy iray tamin'ny adin-tsabatra nifanaovany tamin'ny Samurai iray.
Ny fanoherana vao haingana ny fanonganam-panjakana no naneho ihany koa fa tsy sangisangy ny fahavononan'ny Montenegrina hijoro amin'ireo herim-pisarihana ratsy (Rosia tamin'ity indray mitoraka ity) ary mety hampitolagaga ireo Amerikana mpanolo-tsainan'i Trump na ny filoha Rosiana Vladimir Putin, izay vao haingana no nanao fifampiresahana any an-takonana.